Ilhaan Cumar oo taageero ka heshay Ivanka Trump - BBC News Somali
Ururka u dooda xuquuqda dadka muslimiinta ah ee ugu weyn dalka Mareykanka iyo gabadha uu dhalay madaxweyne Donald Trump ayaa taageeray isku day ay gabar muslim ah oo ka soo jeedda Soomaaliya ku dooneyso in wax looga baddalo sharci muddo aad u dheer ka jiray aqalka wakiillada Mareykanka, oo ah inaan madaxa lagu daboolan Karin gudaha aqalkaas.
Ilhaan Cumar, oo ah gabar qaxooti ah oo Soomaaliya ka timid, isla markaana dhawaan loo doortay xubinnimada aqalka wakiillada ee Koongareeska Mareykanka, ayaa ku biirtay olole ay hoggaamiyeyaasha xisbiga dimuqraaddiga ku doonayaan in wax looga beddelo xeer uu aqalkaas ku dhaqmayay muddo 181 sano ah.
Isbaddalladan ayaa qeyb ka ah qodobbo ay soo bandhigeen mas'uuliyiinta sare ee xisbiga Dimuqraaddiga, oo ay ka mid tahay hoggaamiyaha laga tirada badan yahay ee aqalka wakiillada, Nancy Pelosi.
"Ma jirto cid igu khasbeysa inaan madaxeyga xijaab ku daboolo laakiin aniga ayaa doortay. Waa dookheyga - waana arrinta ugu horreysa ee isbaddalka lagu sameynayo" ayey Ilhaan Cumar ku tiri qoraal ay baraha bulshada soo dhigtay.
Qoraalkeeda ayey sii raacisay "Tanina ma aha wixii ugu dambeeyay ee aan doonayo inaan xayiraadda ka qaado".
"Waxaan taageereynaa dadaalka lagu doonayo isbaddalka xeerarka aqalka, waxaana soo dhaweyneynaa in golaha wakiillada uu noqdo meel si xornimo ah looga dhaqmo diimaha" ayuu yiri Nihad Awad oo ah agaasimaha guud ee ururkaas.
Xuquuqda Sawirka @IvankaTrump @IvankaTrump
Qoraal ay Ivanka soo dhigtay barteeda Twitter-ka ayey ku tiri "Isbaddal sharci oo muhiim ah ayaa lagu sameyn doonaa aqalka Koongareeska".